စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ တခုတည်းသော သရုပ်ဆောင် pneumatic actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Pneumatic Actuator > တခုတည်းသော ခေတ္တ Pneumatic Actuator > စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ တခုတည်းသော သရုပ်ဆောင် pneumatic actuator
AOX-P ကို ကို စီးရီး စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ တခုတည်းသော သရုပ်ဆောင် pneumatic actuaသို့r များမှာ အသုံးချ သို့ လိပ်ပြာ အဆို့ရှင်, အလုံး အဆို့ရှင်, dampers သို့မဟုတ် rotary machines.Because ကျွန်တော်တို့၏ ထုတ်ကုန် များမှာ အားလုံး ကျော်လွန် အဆိုပါ wသို့မဟုတ်ld, ကျွန်တော်တို့ များမှာ ကျြောစောသော fသို့မဟုတ် အရည်အသွေး, တည်ငြိမ် စစ်ဆင်ရေး နှင့် လုံခွုံသော စစ်ဆင်ရေး. ကျွန်တော်တို့၏ AOX-P ကို ကို စီးရီး စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ တခုတည်းသော သရုပ်ဆောင် pneumatic actuaသို့r, အဖြစ် အစဉ်အမြဲ, ဆက်လက် ဤ လမ်းကြောင်းသစ် နှင့် လိမ့်မည် ဘယ်တော့မှ ပြောင်းလဲမှု။
1. ထိပ်တန်း / ခြမ်း mounting စံ။
AOX-P ကိုစီးရီးစက်မှုဇုန်တစ်ခုတည်းသရုပ်ဆောင် pneumatic actuator NUMAR စံနှင့်အညီတည်ဆောက်ထားသည်။ ၏လေကြောင်းထောက်ပံ့ရေး interface ကို အဆိုပါ interface ကိုရန် NUMAR solenoid အဆို့ရှင်ကိုတိုက်ရိုက် install လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။
2. Fastener ။
AOX-P ကိုစီးရီးစက်မှုဇုန်တစ်ခုတည်းသရုပ်ဆောင် pneumatic actuator ရှိသမျှတို့သည်စွဲစေတဲ့အချိန်ကြာမြင့်စွာချေးဖို့ခံနိုင်ရည်ဖြစ်သံမဏိနဲ့လုပ်ထားတဲ့နေကြသည်။
အဆိုပါပိုတငျးထုတ်ကုန်များ၏ Interchange နှင့်ဘက်စုံသုံးအာမခံဖို့ ISO5211, DIN3337 (F03-F25) ၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းအညီတည်ဆောက်နေကြသည်။
Operation Mechanism (လူပျိုခေတ္တ)
အဆိုပါလေကြောင်းအရင်းအမြစ်ဖိအား AOX-P ကို၏ခန္ဓာကိုယ်သို့ကြွလာ ကနေနှစ်ခု piston အကြားစီးရီးစက်မှုဇုန်တစ်ခုတည်းသရုပ်ဆောင် pneumatic actuator လေကြောင်းဝင်ပေါက် (2) နှင့်ဆလင်ဒါကိုယ်ခန္ဓာ၏အဆုံးဆီသို့ piston တွန်း ယင်းဆလင်ဒါခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပိုင်းတစ်ဦးချင်းစီကြီးစွန်းမှာစမ်းကျုံ့ရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေနေစဉ် ယင်းဆလင်ဒါခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ piston နှင့်ကြီးစွန်းတိုင်အောင်အကြားလေကြောင်းဖြန့်ချိနှင့်အတူ လေကြောင်းဝင်ပေါက်ကနေ (4) ထိုအတောအတွင်းည, piston ၏ထိန်သိမ်းက output ကိုမောင်း anticlockwise လှည့်ဖို့ရိုးတံ (ဂီယာဘီး) တစ်ပြိုင်နက်တည်း။ ညှနျကွားပြီးနောက် လေထုအရင်းအမြစ်ဖိအားစမ်းရေပေါက်တစ်ဦးချင်းစီမှာ, solenoid valve များကပြောင်းပြန်ဖြစ်ပါတယ်များ၏ အဆုံးကို reset စတင်နှင့် piston ကတစ်ဦးချင်းစီကတခြားဆီသို့အတင်းအကျပ်နေကြတယ် လေကြောင်းဝင်ပေါက် (2) မှဖြန့်ချိနှစ်ခု piston အကြားလေကြောင်းနှင့်အတူ elasticity ။ ဤအတောအတွင်းက output ရိုးတံ (ဂီယာဘီး) ၏ထိန်သိမ်းခြင်းဖြင့်မောင်းနှင်မည်ဖြစ်ကြောင်း တစ်ပြိုင်နက်တည်း piston လက်ယာရစ်လှည့်ရန်။ (ထို piston အတွက်စုဝေးနေလျှင် တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကနေကွဲပြားခြားနားသောဦးတည်ချက်, ထို output ကိုရိုးတံကိုလှည့်ထွက်လှည့်လိမ့်မယ် စမ်းရေပေါက်ကို reset သည့်အခါပြောင်းပြန်ဦးတည်ချက်, အမည်ရသည့်တစ်ခုတည်းသောသရုပ်ဆောင်ပြောင်းပြန်အတွက် SO) ကိုရိုက်ထည့်
AOX-P ကိုစီးရီးစက်မှုဇုန်များအတွက်အကြံပြုဘေးကင်းလုံခြုံမှုအချက် ပုံမှန်အလုပ်လုပ်အခြေအနေများအောက်တွင်တစ်ခုတည်းသရုပ်ဆောင် pneumatic actuator 30-50% ဖြစ်ပါသည်
ပွနျလညျထူထောငျစဉ်အတွင်းနွေဦးပြန်လာ actuators '' output ကိုလိမ်အားဆိပ်ကမ်း B.On သည့်အနေဖြင့် inputing လေကြောင်းခရီးဖြင့်ထိခိုက်မည်မဟုတ်ပါ ဆန့်ကျင်ကပွနျလညျထူထောငျ oAOX-P ကိုစီးရီးစက်မှုဇုန်တစ်ခုတည်းသရုပ်ဆောင်ကူညီပေးပါမည် စမ်းရေတွင်း actuatorf pneumatic ။
1. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ AOX-P ကိုစီးရီးစက်မှုဇုန်တစ်ခုတည်းသရုပ်ဆောင် pneumatic actuator တိုင်းထုတ်လုပ်ဇာတ်စင်မှာလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းကြောင်းသေချာစေရန်တစ်ဦးပြည့်စုံထုတ်ကုန်အရည်အသွေးစစ်ဆေးရေးစနစ်အားရှိသည်။
2. ကျွန်ုပ်တို့သည်စံအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်အားရှိသည်။ တစ်ခုချင်းစီကို AOX-P ကိုစီးရီးစက်မှုဇုန်တစ်ခုတည်းသရုပ်ဆောင် pneumatic actuator စက်ရုံမထွက်ခွာမီထုတ်ကုန်စမ်းသပ်ခြင်းကိုခံယူပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့3နှစ်နီးပါးမျှဖောက်သည်တိုင်ကြားမှုများရှိသည်။
3. ကြှနျုပျတို့ oa စနစ်, ERP စနစ်, CRM စနစ်, စီမံခန့်ခွဲမှုမှကျွန်တော်တို့ကိုကူညီနိုင်မ, ထိန်းချုပ်ရညျအသှေးရှိတစ်ဦး informationization companyï¼ဖြစ်ကြသည်။
မေး:? ငါတကယ်သူတို့ကိုအရေးတကြီးဖြစ်ပါတယ်လိုအပ်သောကြောင့်ဘယ်လို AOX-P ကိုစီးရီးစက်မှုဇုန်တစ်ခုတည်းသရုပ်ဆောင် pneumatic actuator ရဲ့ပေးပို့လား
Q: သင့်ရဲ့ AOX-P ကိုစီးရီးစက်မှုဇုန်တစ်ခုတည်းသရုပ်ဆောင် pneumatic actuator များအတွက်အာမခံကာလလား
hot Tags:: စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ တခုတည်းသော သရုပ်ဆောင် pneumatic actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်